के तपाईलाई थाहा छ? सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्छ यी ८ जटिल रोगको उपचार! कहा सम्पर्क राख्ने हेर्नुहोस बिस्तृतमा – ZoomNP
के तपाईलाई थाहा छ? सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्छ यी ८ जटिल रोगको उपचार! कहा सम्पर्क राख्ने हेर्नुहोस बिस्तृतमा प्रकाशित मिति: बिहिवार, कार्तिक ११, २०७३ समय - २:४३:३० काठमाडौं– घरपरिवारको कोही सदस्य गम्भीर बिरामी पर्यो भने उपचार खर्चको जोहो कसरी गर्ने भनेर धेरैलाई सताइरहेको हुन्छ । कतिपय रोगको उपचार खर्च त आफ्नो हैसियतभन्दा बाहिर पनि हुन्छ ।